Maskaxdii ka dambeesay afgembigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay oo la qabtay (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Taliyihii hore ciidamada cirka ee Turkiga Jeneral Akin Ozturk ayaa qirtay inuu qorsheeyay afgambigii milatariga ee toddobaadkii hore fashilmay sida ay faafisay wakaalada wararka ee dowladda Turkiga ee ANADOLU.
Jeneral Akin Ozturk ayaa u sheegay baarayaasha inuu doonayay inuu dowladda afgambiyo, talada dalkaasna la wareego.
Dhowr dhaawac ayaa madaxiisa iyo qaarka hore jirkiisa lagu arkay kuwaasoo u muuqday jirdil sida ay muuujinayaan sawiro laga soo qaaday.
Baarayaasha ayaa sheegay in Jeneral Akin Ozturk uu inkiray markii hore inuu ku lug lahaa afgambiga la isku dayay, isagoo sheegay inuu ka shaqeeyay in la joojiyo, wuxuuna ka mid ahaa 11 sarkaal oo loo xiray afgembiga dhicisoobay.
Askar ka badan toddobo kun oo u badan ciidamada milateriga ayaa loo xiray iney ku lug lahaayeen afgembigan dhicisoobay, waxaana shaqada laga ruqseeyey siddeed kun oo ka tirsanaa ciidanka Booliska.
Sirdoonka wadanka Turkiga ayaa weli wada baraitaanada iyo xariga dadka lagu tuhmo iney ku lug lahaayeen afgembigaas fashilmay.